कोरोना भाइरस पछाडिको शक्ति राष्ट्रको युद्ध, चीन बन्ला विश्व नेता ?
कृष्ण गिरी काठमाडौं, १२ चैत
विश्वभर कोरोना भाइरसको महामारी फैलिएको छ । कोरोना भाइरसका कारण अमेरिका र चीनबीच लडाइँ सुरु भएको छ । यो लडाइँमा दुवै देशले धेरै कुरा दाउमा लगाएका छन् । चीन विश्वको नेता बन्ने कोसिसमा छ, जबकि अमेरिकाले विश्वमा नेताको आफ्नो हैसियत गुमाउँदै गएको देखिन्छ ।
यो विश्वका लागि राम्रो समय होइन । चीन र अमेरिकाको सम्बन्ध पनि राम्रो छैन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प लगातार कोरोना भाइरसलाई ‘चाइनिज भाइरस’ भनिरहेका छन् ।
अमेरिकाका विदेशमन्त्री माइक पोम्पेयोले कोरोना भाइरसलाई 'वुहान भाइरस'को संज्ञा दिएका छन् । अमेरिकाका यी अभिव्यक्तिबाट बेइजिङ पक्कै पनि खुसी छैन ।
अमेरिकाका राष्ट्रपति र विदेशमन्त्री दुवैले कोरोना भाइरसलाई चीनले सुरुमा नै नरोकेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । तर, चिनियाँ सरकारका प्रवक्ताले ती सबै आरोपहरू झूटा भएको बताएका छन् । अमेरिकाले कोरोना भाइरसका बारेमा सत्य कुरा गर्न नचाहेको आरोप चीनले लगाउँदै आएको छ ।
अर्कोतर्फ चीनका सामाजिक सञ्जालमा भने यो महामारी अमेरिकी मिल्ट्री जर्म वारफेयर प्रोग्रामको माध्यमबाट फैलिएको हल्ला तीव्र रूपमा फैलिइरहेको छ । वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो भाइरसको संरचना पूर्ण रूपमा प्राकृतिक हो ।
अमेरिकाको गलत निर्णय र चीनको बुद्धिमत्ता
चीन र अमेरिकाबीचको यो युद्ध आरोप प्रत्यारोपमा सीमित छैन । धेरै महत्त्वपूर्ण घटनाहरू घटिरहेका छन् यसबीच । यो महिनाको सुरुमा अमेरिकाले इटालीसहित कयौँ युरोपियन देशका यात्रु र विमानहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगायो । चीनले घोषणा मात्र गरेन, इटालीमा आफ्नो देशबाट मेडिकल टिम, औषधि र अत्यावश्यक सामग्रीसमेत पठायो ।
इटाली अहिले कोरोना भाइरससँग सबैभन्दा बढी लडाइँ लडिरहेको छ । यति मात्र होइन, चीनले इरान र सर्बियामा पनि मेडिकल सामग्रीको आपूर्ति गरिरहेकोे छ ।
यो विश्वलाई देखाउनका लागि पनि धेरै ठूलो चिज थियो साथै यो पनि देखियो कि चीन र अमेरिकाबीच पर्दा पछाडि ठूलो लडाइँ सुरु भइसक्यो ।
चीन यो आपतको समयमा विश्वको नेतृत्वको रूपमा स्वयंलाई उभ्याउने कोसिस गरिरहेको छ । वास्तविकता यो हो कि अमेरिका यो लडाइँमा चीनको तुलनामा पछि परेको छ । यो लडाइँमा सानो मोबाइल युएस एयरफोर्स मेडिकल सुविधा ढिला इटाली पठाएको कसैले ध्यान नै दिएन ।
यो इतिहासमा पहिलो मौका हो, विश्वभरका देशहरूको प्रशासनिक र राजनीतिक व्यवस्थाको क्षमता जाँच भइरहेको छ । कोरोना भाइरसविरुद्धको लडाइँमा नेतृत्व नै धेरै ठूलो कुरा हो ।
अहिले भएका राजनीतिक नेताहरूको यस आधारमा मूल्याङ्कन हुनेछ कि यो सङ्कटको समयमा उनले कसरी काम गरे र कति प्रभावकारी तरिकाले नियन्त्रण गरे । यी राजनीतिक नेतृत्वहरूले कसरी आफ्नो देशका साधन, स्रोत प्रयोग गरेर यस महामारीलाई रोके ।
विश्व अर्थव्यवस्थामा चीनको हुनेछ दबदबा
यो महामारी यस्तो समयमा फैलिएको छ, जब अमेरिका र चीनको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै राम्रो छैन । २ देशबीच लामो समयदेखि व्यापारिक युद्ध चलिरहेको छ । उनीहरूबीच एउटा व्यापार वार्ताबाट ‘डेडलक’ केही हदसम्म तोड्ने काम भएको छ तर पूर्ण रूपमा वार्ता सफल भएको छैन ।
चीन र अमेरिका दुवै एक पटक फेरि हतियारको होडबाजीमा जुटेका छन् । दुवै देश भविष्यमा एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा हुन सक्ने कुनै टकरावका लागि स्वयंलाई तयारी गर्न जुटेका छन् ।
चीन कमसे कम यस क्षेत्रमा स्वयंलाई एक सैन्य 'सुपरपावर' सावित गर्न सफल भइरहेको छ । चीनलाई अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा आफ्नो भूमिका निभाउने उसको समय आइसक्यो भन्ने लागिरहेको छ ।
चीन र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध धेरै जटिल भएको छ । सङ्कटका समयमा यस महामारीबाट मुक्ति पाउनु र यसबाट मुक्तिपछि विश्वका लागि २ देशको सम्बन्ध कस्तो हुनेछ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।
जब कोरोना भाइरसमाथि विजय हासिल हुनेछ, त्यसपछि चीन आर्थिक रूपमा पुन: उदाएर विश्व अर्थतन्त्रलाई फेरि उठाउन महत्त्वपूर्ण हुनेछ ।
चीनको सहयोग लिन आवश्यक
कोरोना भाइरससँग लड्न चीनको सहयोग लिनु आवश्यक छ । मेडिकल डाटा र अनुभव सबैलाई भन्न आवश्यक छ । चीन मेडिकल सामग्री, मास्क र सुरक्षात्मक उपकरणहरू जस्ता 'डिस्पोजेबल' कुराको उत्पादक हो ।
संक्रमित बिरामीको उपचार गर्ने टिम र यस भाइरसबाट बच्नका लागि काम गर्ने अन्य मानिसहरूका लागि यी उपकरणहरू अत्यावश्यक वस्तु हुन् । विश्वभर यी सामग्री आपूर्ति गर्न आवश्यक छ ।
धेरै मानेमा चीन विश्वभरको उत्पादनको 'वर्कसप' हो । चीनबाहेक केही देशसँग मात्र आफ्ना उत्पादन कयौँ गुणा बढाउन सक्ने क्षमता छ । चीन यो मौकालाई सदुपयोग गरिरहेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले यो मौका गुमाएको उनका आलोचकको आरोप छ ।
ट्रम्प प्रशासनले सुरुमा नै यो संकटलाई गम्भीर रूपमा लिन सकेन । उनले ‘अमेरिका सबैभन्दा अगाडि’को नारा दिँदै आए पनि यो मौकालाई सदुपयोग गर्नबाट चुके ।
को बन्ला विश्व नेता ?
यो भाइरसले धेरै चिजलाई दाउमा लगाएको छ । त्यसमा प्रमुख कुरा हो, विश्वको नेतृत्व । एसिया विज्ञ तथा ओबामा प्रशासनको समयमा पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रीय मामला हेर्ने उपविदेशमन्त्री कर्ट एम कैम्पबेला र रेस दोषीले फरेन अफेयर्समा एक लेख लेखेका छन्, ‘बितेका ७ दशकमा विश्व शक्तिको रूपमा अमेरिकाको दर्जा केवल पुुँजी र सैन्यबलमा खडा थिएन, अमेरिकाको घरेलु शासनको वैधानिकता, विश्वमा सार्वजनिक कुराको प्रावधान र संकटको समयमा तीव्र रूपमा काम गर्ने र सहयोग गर्ने इच्छाको आधारमा आधारित थियो ।’
उनीहरूको भनाइ छ, ‘कोरोना भाइरसको महामारीले अमेरिकाको नेतृत्वमा यी तीनै कुराको परीक्षण गरिरहेको छ । अहिलेसम्म वासिङटन यो परीक्षणमा असफल भएको छ । अर्कोतर्फ, जब वासिङटन असफल भइरहेको छ, बेइजिङ तीव्र रूपमा यो मौकामा अमेरिकाको गल्तीको फाइदा उठाइरहेको छ । महामारीको समयमा राम्रो व्यवहार गरेर खालि रहेको अवस्थामा उसले स्वयंलाई विश्वको नेता साबित गर्न चाहन्छ ।’
प्रोपोगण्डामा चीन अगाडि
मौका परस्त हुनु सजिलो हुन्छ । कयौँ मानिस यो सोचेर आश्चर्यचकित छन् कि यस्तो अवस्थामा पनि चीनले आफ्नो फाइदा कसरी सोचेको होला ?
कोरोना भाइरस चीनमा देखियो । वुहानमा विकसित भएको यस संकटमा बेइजिङले सुुरुवाती समयमाा राम्रोसँग ध्यान दिएन । यसलाई गोप्य रूपमा समाधान गर्न खोज्यो । तर, पछि चीनले आफ्नो साधन, स्रोतले प्रभावकारी र प्रभावित गर्ने गरी काम गर्‍यो ।
प्रेस फ्रिडम अर्गनाइजेसन अमेरिकाका सीईओ सुजेन नोसेलले फरेन पोलिसी वेबसाइटमा एक लेख लेखेका छन् । त्यसमा भनेका छन्, ‘सुरुवाती समयमा चीनले यसलाई नस्वीकार्नुका पछि अव्यवस्थाको कारणले सामाजिक व्यवस्थाले आक्रोश उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने डर थियो । यस्तोमा बेइजिङले ठूलो मात्रामा आक्रामक तरिकाले घरेलु र विश्वमा प्रोपोगाण्डा क्याम्पेन सुरु गर्‍यो । विश्वव्यापी रूपमा यो भाइरस फैलिनमा आफ्नो भूमिका लुकाउन र पश्चिमा देश विशेष गरेर अमेरिकाविरुद्ध आफ्नो राम्रो छवि बनाउन सुरु गर्‍यो ।’
के विश्व समीकरण बदलिन्छ ?
कयौँ पश्चिमी टिप्पणीकार चीनलाई तानाशाह र बढी राष्ट्रवादी देश बनिरहेको देखिरहेका छन् । यिनीहरूलाई डर छ कि महामारीको असरले यो प्रवृत्ति तीव्र रूपमा बढ्न सक्छ । तर, वासिङटनको विश्व नेताको दर्जामा यस महामारीको असर धेरै बढी हुन सक्छ ।
अमेरिकाका सहयोगी राष्ट्रले संकटको यस समयमा उसको भूमिकालाई नजिकबाट नियालिरहेका छन् । उनीहरू खुला रूपमा ट्रम्पको आलोचना गरिरहेका छैनन् । तर, यीमध्ये केही चीनसँग अमेरिकाले गरेको व्यवहारलाई राम्रो मान्दैनन् । यसमा चिनियाँ प्रविधि (हुवावेई विवाद) र इरान र अन्य क्षेत्रीय मुद्दासमेत छन् ।
चीन यस महामारीको समयमा आफ्नो पहुँको प्रयोग गरिरहेको छ । ऊ भविष्यको सम्बन्धका लागि नयाँ मानक बनाइरहेको छ । यसमा चीन तीव्र रूपमा विश्वका लागि एक आवश्यक शक्ति बनिसकेको छ ।
कोरोना भाइरससँगको लडाइँको समयमा आफ्नो छिमेकी जापान र दक्षिण कोरियासँग हुने गठबन्धन र युरोपियन युनियनका लागि स्वास्थ्य उपकरण पठाएकालाई यसै सन्दर्भमा हेरिएको छ ।
के अमेरिकाका लागि स्वेज मुभमेन्ट हुन्छ ?
केम्पबेल र दोषीले आफ्नो फरेन अफेयर्समा लेखेको लेखमा यसको तुलना बेलायतको पतनसँग गरेका छन् । उनीहरूले भनेका छन्, ‘सन् १९५६ मा बेलायतले गरेको स्वेज क्यानल कब्जा गर्ने असम्भव कोसिस उसको शक्ति समाप्त भएको थाहा पाउने महत्त्वपूर्ण क्षण थियो । यसले बेलायत विश्वको शक्तिशाली देशको दर्जाबाट सकिएको देखाएको थियो ।
उनीहरूले लेखेका छन्, ‘आज अमेरिकी सरकारले बुझ्नुपर्छ कि यदि अमेरिकाले यो समयमा आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेन भने कोरोना भाइरस अमेरिकाका लागि एक स्वेजको घटना साबित हुन सक्छ ।’
बीबीसी हिन्दीबाट अनुदित
प्रकाशित मिति: बुधबार, चैत १२, २०७६, ०७:४४:००
गृहले ल्यायो क्वारेन्टाईनबाट भागे तत्काल प्रहरीलाई खबर पुग्ने 'एप'
अस्पतालको छैटौँ तलाबाट भाग्न खोज्दा कोरोना संकास्पद बिरामीको मृत्यु
कोरोनाविरुद्ध प्रतिकार्यको पूर्वतयारी थाल्न एनजीओलाई निर्देशन
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपः अमेरिका र चीनमध्ये कसले मार्ला बाजी ?
कोरोना भाइरस संक्रमण नभएका यी ३८ ठाउँ
कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न यस्तो छ ७ सरकारको तयारी
यस्तो छ पहिलो कोराेना भाइरस संक्रमितको अनुभव
पार्टीको सर्कुलरपछि के गर्दै छन् नेकपाका नेता, कार्यकर्ता ?
गण्डकीमा ९३ जनाको कोरोना नमुना संकलनः २ पोजेटिभ, ७३ नेगेटिभ
अमेरिकामा बाघमा पनि देखियो कोरोना संक्रमण
कोरोना रोकथाम कोषमा एक अर्ब ३२ करोड जम्मा
नआत्तिऔं, कोरोनासँग लड्न सकिन्छ
रौतहटमा वन सुरक्षा गस्ती टोली र तस्करबीच गोली हानाहान
समग्र अवस्थाको मूल्यांकन गरेर ‘लकडाउन’ बढाउँछौँः गृहमन्त्री थापा
कोरोनाको असर : बोइङको कारखाना अनिश्चितकालीन बन्द